गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कार्यालयमानै र”क्सीको बो’तल सहित भेटिए ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कार्यालयमानै र”क्सीको बो’तल सहित भेटिए !
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेपालको प्रदेश नम्बर ४ का प्रथम मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेशसभामा बहुमत भएका एमाले र माओवादीले सरकार गठनको दाबी गर्दै गुरुङलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेका थिए । उनको जन्म २०१४ साल फागुन १ गते गंगाप्रसाद र चिनी गुरुङका छोराका रुपमा लमजुङ जिल्लामा पर्ने साविकको गिलुङ गाविस-८ टक्सार हाल क्व्होलासोथार गाउँपालिका-९ मा भएको हाे ।
हो आज यिनै गुरुङको जन्मदिनको अवसरमा मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो जन्मदिनमा भन्दै मन्त्री कार्यालयमा नै र”क्सीको भोज दिएका छन ।
उनले रे’ड’ले’वल हु’स्की’को चु’स्की मुख्यमन्त्री बस्ने टेवलमा नै राखेका छन भने अन्य कर्मचारीलाई समेत उनले र”क्सी दिएका छन ।
गण्डकी प्रदेशका नेकपाका नेता समेत रहेका गुरुङले टेवलमा राखिएको हु’स्की हेर्दै हास्दै गरेको फोटो समेत सार्वजनिक भएको छ । उनले मुख्यमन्त्रीको मर्यादा भन्दा बाहिर गरेको उक्त ह”र्कतको सबैले आलोचना गरेका छन । कतिपय उनका आलोचकले त उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन समेत माग गरेका छन ।
विज्ञानमा स्नातक गरेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पञ्चायतकालमै २०३४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका थिए । सुरुमा शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी त्यहीँबाट राजनीतिमा होमिएका थिए । शिक्षणमै हुँदा आन्दोलनमा उत्रेकाले उनी पटक पटक पञ्चायतकालमै प्रहरी हिरासतमा परेका थिए ।
२०४० मंसिरमा उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनको राजनीतिक यात्रा भने २०२७ सालमा ईशानेश्वर प्रमोद हाईस्कुल, भोर्लेटार-अनेरास्ववियूको तर्फबाट स्ववियु सचिव निर्वाचित भएसँगै सुरु भएको हो।
राजनीतिक यात्रासँगै उनले २०३७ मा तत्कालीन नेकपा मालेको सदस्यता लिएका थिए । बहुदलपछिका दुई संसदीय निर्वाचनमा उनले लमजुङबाट जित आत्मसाथ गर्न सकेनन् । तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा लमजुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट १९ हजार ५ सय ८३ मतसहित उनी प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका थिए ।
उनी २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री पनि बनेका थिए ।
गुरुङमाथि उपाध्यक्ष अशोक राईले एमाले छाड्दा र त्यही क्रममा पार्टीमा चर्को जातीय राजनीति गरेको आरोप पनि लागेको थियो । अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा जान खोजेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । उनले यी आरोपबीच एमालेमै रहेर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अघि बढिरहे । [
खुशीको खबर ! लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकियो !